10 Vazhinji Vanoda Vakaroora Vanofamba | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Vazhinji Vanoda Vakaroora Vanofamba
Kudanana, zvinonakidza, pamwe nemiganhu yeItaly, muAlps Alps yekunze kwemusuwo, kana kumwe kunhu kuChina, top idzi 10 waida marwendo ekuroora achakushamisa iwe.
1. Rwendo Rwunonyanya Kuda Vaviri: Yerudo Guta Kuputsa MuParis
Mukurudziro kumafirimu anonyanya kudanana, Paris ndiyo inonyanya kudanana nzira yeHollywood-dhizaini vaviri rwendo. Guta rinonyanya kudanana, uye imwe yeakafambwa kwazvo pasi, ichiri uye inogara iri nzvimbo inodiwa kwazvo kune vakaroorana.
Kana iwe uine shuwa nezvese French, patisserie, French minda, uye migwagwa inofadza, ipapo kuputsa kweguta muParis yakakunakira iwe. Uyezve, rwendo rwerudo kuenda kuParis ndiyo nzvimbo inodiwa kwazvo kune vaviri vanoda kurovera, uye kurarama la vie en rose.
2. Vazhinji Vanoda Vakaroora Kuenda kuItaly: Amalfi Coast
chikafu, mukare maonero, uye negungwa, gadzira Amalfi mhenderekedzo imwe yenzvimbo dzinonyanya kudiwa kune vafambi nzendo. Idzo dzimba dzine mavara pamawere, migwagwa inotenderera, uye gungwa parutivi pako, ndizvo zvese zvaunoda kune vanofemereka vaviri’ zororo.
Amalfi Coast ndeye 50 makiromita mahombekombe ezvitsuwa zvidiki, mahombekombe, uye pekugara pekuvanda pakavanzika nemaonero asingakanganwiki. Iwe unogona kuenda kunofamba, kana kushambidza nezuva, kubika, kana kudya mune imwe yeakanakisa nzvimbo dzekudyira dzegungwa. Sarudzo paAmalfi Coast hadziperi, kunyangwe mumataundi madiki ari mumahombekombe eItari, tora zvako!
3. Chiwi cheSkye, Scotland
Nemakomo anoyevedza, maonero anoyevedza, uye inonakidza tsika, Scotland ndiyo imwe yenzvimbo dzinokatyamadza kwazvo pasirese. Isle yeSkye ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza dzinoyevedza muScotland, uye iwe uchazoda zvirinani 2 mavhiki ekunakirwa nerunako rwayo rwakawanda.
Kunyangwe iwe uchida kuyemura iyo maonero, kana kuitsvaga netsoka mune imwe ye nzira dzakawanda dzekukwira makomo, Isle yeSkye chishamiso chechisikigo. Semuyenzaniso, kana iwe uri murume anofarira, ipapo iwe unozoda kutsvaga iyo geological kuumbwa kwe Quiraing. Pane rimwe divi, unogona kuve nenguva yekudanana muFairy dziva, kana kushanyira Dunvegan castle uye gadheni.
Nemamwe mashoko, chiwi cheSkye inzvimbo inoshamisa yekufamba kwevakaroora, Kutenda kunzvimbo dzinoyevedza dzeScotland, mipata, uye zvinoshamisa pamhenderekedzo. pano, waigona kufamba makabatana maoko, ingonakidzwa nerwendo pamwe chete.
4. Vakaroorana Vanonyanya Kutsvaga Kukwira MuSwitzerland
Nemakomo echando, mafuro manyoro, uye maonero anoyevedza anoita kunge mifananidzo, Switzerland inoshamisa vakaroora rwendo kuenda. Vakaroorana vanonyanya kudiwa muSwitzerland maZermatt, Rhine Falls, uye mupata weLauterbrunnen. Kana uchida adventures zvino Zermatt ndiye akakwana Ski rwendo iwe, uye kana iwe uchida kuzorora mune inoyevedza mamiriro, ipapo mupata weLauterbrunnen wakanaka.
Switzerland ine vakaroorana vasingagumi vanoenda kunzvimbo, saka zvinonyatsoenderana nezvinangwa zvako zverudo kupukunyuka. Chero nzira, iwe unowana akawanda erudo mavara, kwehusiku hwechipiri, kana nekuda kwekuti iwe unoda kukoshesana, pachiitiko chakakosha. saka, it is really recommended to plan at least 7 rwendo rwezuva kuSwitzerland.
5. Venice, Itari
Chikafu chikuru, mhepo inoshamisa, uye dzakawanda dzakavanzika nzvimbo dzerudo. Rwendo rweVenice rwuri pane ese emabhaketi emhuri runyorwa. Huwandu hwevashanyi vanoenda kuVenice gore rega rega hwakanyanya, zvakadaro, runako rwayo uye runako zvinokutapa nguva yega yega. Saizvozvo, zvinofadza kwazvo, kuti hauzomboona munhu wese, uye ingova nenguva inoshamisa pane yako yerudo kutiza.
Rwendo rweVenice nderimwe rwepamusoro 5 vanonyanya kudiwa marwendo nekuti akakwana kwevhiki pfupi. Guta rine zvakawanda zvinoonekwa, Chikafu cheItaly, uye sarudzo dzakanaka dzekugara, saka iwe uchawana paradhiso pane gondola. zvisinei, kana iwe uchida kupukunyuka uye uwane akakomberedza matombo eItaly ipapo Venice, unogona kuenda pane imwe yeakawanda nzendo dzezuva kubva kuVenice.
6. Vazhinji Vanoda Vakaroora Glamping Zororo: MaFrance Alps
Kupenya ndiyo imwe yenzira dzinotyisa dzekufamba muEurope, inosanganiswa neFrance Alps, uye mune vakaroorana vanodanana kwazvo’ rwendo. Rudzi urwu rwekudzika musasa rwakawedzera kutetepa uye runoshamisira pane musasa wekutanga wetende. Gara musango uye wakanaka hunhu, nemaonero anoyevedza eFrance Alps.
Kugumbatira mudenga rako bungalow, kabhini inodziya, kumuka kushiri dzichiimba, kunwa kofi, uye kufamba uchikwidza wakananga kubva pasuo – ngano kudanana. Kana dendere rako rerudo rakashongedzwa zvakakwana, uye munzvimbo dzinoyevedza, haudi chero chimwe chinhu cheiyo isingakanganwiki zororo rerudo.
7. Amsterdam: Relaxing Houseboat Zororo
Amsterdam nderimwe remaguta anonakidza muEurope kune vakaroorana, uye imba yekugara igwa ndiyo inonyanya kudanana muAmsterdam. Zvikepe zveimba ndeimwe yemifananidzo yeAmsterdam, yakamira pedyo nemigero. zvisinei, kana ukangopindira, iwe uchaiwana iri super inodziya, vepedyo, uye kudzivirirwa kubva kumapoka achiyemura migero.
Pasina mubvunzo, Amsterdam inodedera, chadenga, tsika nemagariro, uye runako runofadza vakaroorana vanobva kumativi ese epasi. Uyezve, guta uye rwizi maonero, mafi kunze kwehwindo rako, kudanana kwako kutiza kunenge kurota.
Makuru makuru ezvokudya, inofadza Notting Hill, Kensington Gardens, rwendo rwevaviri kuLondon rwendo rwusingakanganwike. Guta rinopa zviitiko zvakawanda kwazvo, saka iwe unogona kufunga kuti zvakawandisa kune rudo rwekutiza.
saka, zvakakodzera kuti uite zvishoma zvekutsvaga, kubva kunzvimbo yakanakisa, uye zvinhu zvaunoda chaizvo kuita. Nemamwe mashoko, isa pamwechete rondedzero yemisika uye zvinokwezva zvaunoda kushanyira. Pamusoro pe, siya yakawanda nguva yemabiko pamusoro pevakawanda matenga edenga. Iko kukosha kwese kwerwendo kudzosa kudanana uyezve kuputika pamwechete.
9. Vazhinji Vanoda Vakaroora Vanofamba MuItaly: Waini Rwendo MuTuscany
yemizambiringa, zvikomo zvakasvibirira, uye Chikafu cheItaly, rwendo rwekuItaly waini capital iri pane ese mabhakiti mabhaketi rondedzero. Kufamba neminda yemizambiringa, kusvuta kubva pawaini yako tsvuku, uye kugadzikana munzvimbo ine runyararo, zvirokwazvo iwe unobvuma kuti Tuscany inonzwika samwari.
chaizvo, Tuscany ndeimwe yepamusoro vakaroora vanoenda kunzvimbo dzese gore rimwe chete. Iwo mashiripiti maonero uye waini inokwezva vakaroora kubva pasirese pasirese, zvichivaita kuti vadzoke gore rega rega.
10. Vazhinji Vanoda Vakaroora Vanofamba MuChina: Yulong Rwizi
China inzvimbo inonakidza, uye rwizi Yulong ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza uye dzinonakidza. Yulong Rwizi chikamu cheLi Rwizi, refu uye isingaperi, yakakomberedzwa nemasango egirini, misha, neminda yemupunga. saka, kuenda pane imwe nguva uchitevedza Rwizi rweYulong chiitiko chemashiripiti.
Kuwedzera kune iyo runako, ari Yulong Rwizi iri kumusha kumisha yakawanda uye vanhu verudzi. saka, uchave nemukana usingawanzo kudzidza nezve mararamire munzvimbo yeYangshuo, tsika nemagariro, uye iwe, sezvazvave kwemazana emakore emakore.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga imwe yeiyi 10 vakaroorana vanonyanya kudiwa nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Vazhinji Vanoda Vaviri Vanofamba" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#rudo vakaroorana CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews